Ungawana sei rezinesi rekuchengeta vakwegura - Zvinyorwa
nei app yangu yakamirira
fios mobile app isiri kushanda
shumba inomiririrei kuhope
iphone 4 wifi haina kubatidza
uchishandisa airpod nemaapuro wachi
Vakwegura vachengeti makosi
Nehuwandu hwevanhu vakuru hwevanhu vakuru vanodikanwa kutarisirwa chaiko asi vanoshuvira kushandisa avo ekupedzisira makore ehupenyu munyaradzo yeimba, kudiwa kwevachengeti vega kunowedzera.
Vanochengeta vanopa akasiyana masevhisi, asi vanoshandirwa kunyanya kusangana nezvinodiwa zvevatengi vavo, kungave kuri kubatsira nekufamba uye kugeza, kupa mishonga kana kupindura foni.
Mune mamwe matunhu, hapana marezinesi epamutemo kana zvitupa zvinodiwa kuti uve muchengeti wevakuru ; zvinongofanira kuzadzikiswa zvimwe zvinodiwa nemutemo . Nekudaro, ivo vanopihwa uye inokurudzira chaiwo makosi ekudzidzisa uye institutional certification .
Dzimwe nyika dzakadai se Massachusetts neNew Jersey Kana iwe usina kubvumidzwa kwako, haugone kutora chikamu muzvirongwa zvehurumende, kunze kwekunge vawana kubvumidzwa CHAP .
Dhipatimendi rehutano rehurumende yega yega rinotonga chitupa
Bazi rezvehutano renyika yega yega rinotarisira kubvumidzwa kwekudzidziswa. CNAs dzinofanirwa kuve nehuremu hwe Maawa makumi manomwe nemashanu ekudzidziswa uye mamwe matunhu anoda mamwe maawa . CNAs dzinofanirwa pasa bvunzo yenyika yekupihwa chitupa . Vachengeti vehunyanzvi vanofanirwa kusangana nezvinodiwa nehurumende kudzidzisa uye vanogona kutora online yekuchengeta vanochengeta.
New Jersey semuenzaniso weHurumende Mutemo.
Dhipatimendi rega rega reHutano rezvehutano rinodzora kudzidziswa kwevanochengeta mune yevakwegura indasitiri yekuchengeta basa revachengeti vehunyanzvi. Zvinodzidziswa zvinodiwa kumisha inochengeterwa vakwegura, vanobatsirwa nharaunda dzinogara, nemasangano ekuchengetedza dzimba epamusoro anochengetedza vese vakuru nevachengeti.
New Jersey Vakuru Vanochengeta Vanoda Kudzidziswa.
Maawa 76 hunyanzvi hwekudzidzisa kwevanochengeta hunodiwa nemutemo wenyika
Maawa makumi matanhatu ekudzidziswa anogona kuve epamhepo uye maawa gumi nematanhatu emakiriniki uye marabhoritari kudzidziswa kwehuwandu hwemaawa makumi manomwe nemanomwe ekudzidziswa anodikanwa kuNew Jersey Home Health Aide uye Homemaker Certification kuve NJ CHHA.
Makambani ekuchengetedza vakuru anoda hunyanzvi hwekuchengeta. Tora online yekuchengeta muchengeti yakagadzirirwa nevevakuru indasitiri yekuchengetedza uye inodikanwa mumatunhu mazhinji kuratidza kune waunoshandira kuti une ruzivo rwekupa yakachengeteka, yemhando yepamusoro kuchengetwa kwevakuru.
Kuwedzera humbowo, ruzivo, mareferensi, uye zvitupa zvine chekuita nebasa iri, zvinowanzoita kuti iwe uwane nzvimbo yekuchengeta.
Sangana nezvinotevera zvinodiwa
Iva nemakore gumi nemasere.
Kukwanisa kupfuudza cheki kumashure.
Kunyangwe kuve nemhosva dzakakomba kusingaite kuti zvive zvisingabviri kuve muchengeti, mazhinji mamiririri haazopupure munhu chero mhando yerudzi rwemhosva dzakakomba kana aine chakakanganisika pakanyorwa kwavo.
Mune matunhu anobvumidza kushandiswa kwembanje yekurapa, vachengeti vanobata mbanje havagone kuve nenhoroondo yemhosva dzakakomba dzine chekuita nemishonga. Dzimwe mhosva dzekutadza dzinobvumidzwa, asi zvichave zvakaoma zvikuru kuwana chinzvimbo semuchengeti.
Nyoresa mudunhu iwe rauchange uchishandira mariri
Kuti uite izvi, bata hofisi iri mudunhu rako inobata zvinyorwa izvi, zvinowanzo daidzwa Dhipatimendi reMhuri Dzevhisheni kana Dhipatimendi reSocial Services . Udza department raunoda kunyoresa semunhu anotarisira wega uye ichakutungamira kuburikidza ne mamiriro ako ehurumende .
Vandudza magwaro ako
Chekuchengetedza muchengeti kosi.
Natsiridza magwaro ako nekutora YeMunhu Kuchengeta Mubatsiri certification kosi . Unogona kutora chirongwa pamhepo kana musangano rakatarisana-kumeso iyo inoisa uye inodzidzisa vachengeti.
Zvisinei, nzwisisa izvozvo Zvidzidzo zvepamhepo hazvizivikanwe nechero yenyika kana yedunhu muviri . Izvi zvinoreva kuti ivo havana kubvumidzwa. Izvi zvitupa hazvina simba repamutemo uye hazvidiwe.
Muenzaniso wesangano repamhepo rinopa chitupa ichi Institute for Professional Kuchengetedza Dzidzo . Kana iwe ukafunga kuiswa neanopa iyo inopa kirasi yekudzidzira, kutsvaga kwepamhepo kunowana iyo agency munzvimbo yako inopa iyi sevhisi.
Ita shuwa kuti iro agency rakapihwa marezenisi nedunhu rako Dhipatimendi Rehutano ; kana zvisina kudaro, hazvisi pamutemo kuti uzviposte. Iwe unofanirwa kuve wakasimbiswa pamberi pekuti agency irege kukuwana iwe. Nekudaro, ichi chitupa hachidiwe kuti iwe uve muchengeti, asi zvinodikanwa kuti iwe uiswe nesangano.
Simbisa magwaro ako neakananga ekudzidziswa kwekuchengetwa kwemusha. Tsvagurudzo yepamhepo inoburitsa pachena vamiririri munharaunda yako vanopa sevhisi iyi. Muenzaniso wesangano rakadai Kumba Panzvimbo Yekutarisira Kwevakuru , iyo ine mahofisi munyika yose.
Inopa in-munhu kudzidzisa kune-mumba vanochengeta vanokubatsira kuti utaure nevanhu vakura, kuronga zviitiko, kuziva kurwara uye kushushikana, uye kudzidza nzira dzekuchengetedza. Masangano ese anoisa vachengeti anofanirwa kunyoreswa nehurumende uye kupa kudzidziswa kwakatenderwa nenyika.
Zvakare simudzira magwaro ako nekuenda kuchikoro chevanamukoti, kana kuwana CPR uye Chitupa Chekutanga Chekubatsira kubva kuAmerican Red Cross.
Gadzira yakanyorwa chibvumirano chebasa chinotsanangudza zvakadzama sezvingabvira basa, mabasa, mabasa, uye muripo wechigaro. Chibvumirano chebasa chiri pakati pako neanokuhaya kubasa rako rekutarisira. Uyu anogona kunge ari iye munhu wauri kutarisira zvakananga, mhuri yako, kana muchengeti wako zviri pamutemo. Kana ikaiswa nesangano, rinenge riri pakati pako nesangano. Ive neshuwa yekuverenga kontrakiti zvakanyatsonaka usati waisaina. Zvakare, ita kuti chibvumirano chizivikanwe.
Makosi ekuchengeta vakwegura mujezi nyowani
Bazi rezvehutano renyika yega yega rinotarisira kubvumidzwa kwekudzidziswa. MaCNA anofanirwa kuve neashoma emaawa makumi manomwe nemashanu ekudzidzira uye mamwe matunhu anoda mamwe maawa. CNAs dzinofanirwa kupasa bvunzo yehurumende yechitupa. Vachengeti vehunyanzvi vanofanirwa kusangana nezvinodiwa nehurumende kudzidzisa uye vanogona kutora online yekuchengeta vanochengeta.
7050 Nzira 38
Mavhiki makumi maviri nemana emadhora chiuru nemazana mashanu
Tuberculosis ganda bvunzo
Kuverenga nzwisiso bvunzo
Chirungu hunyanzvi bvunzo
Masvomhu hunyanzvi bvunzo
Zera rakaderera re18
Bata: (856) 663-4299
Yekutanga Kirasi Yekuchengetedza Kumba, Inc.
Mavhiki maviri e $ 500.00
Kuendesa mafinger prints
Udza mashoko: CSANTANA @ FIRSTCLASS-HOMECARE. COM kana (732) 661-0677
Bergen Nharaunda Koreji
400 Paramus Mugwagwa
Paramus, NJ 07652-1595 Chirongwa che
Mavhiki matanhatu e $ 1,090.00
HS Diploma kana GED yakaenzana
Bata: (201) 612-5473
Atlantic Cape Nharaunda Koreji
5100 Nhema Bhiza Pike
Mays Kumhara, NJ Chirongwa 08330-2699
mavhiki e $ 1,900.00
Udza mashoko: accadmit@atlantic.edu kana (609) 343-5000
Monmouth University Chikoro cheNursing uye Hutano Zvidzidzo
West Long Bazi, NJ 07764
6 vhiki chirongwa chemutorwa
Udza mashoko: bpaskewi@monmouth.edu kana (732) 571-3443
Mercer County Community College Center Yekuenderera Zvidzidzo
15 vhiki chirongwa che $ 1,200.00
Udza mashoko: ComEd@mccc.edu kana (609) 570-3311
Atlantic Guta, NJ
Chirongwa 08401 mavhiki e $ 1,900.00
Udza mashoko: accadmit@atlantic.edu kana (609) 343-4800
341 Court House-Maodzanyemba Dennis Road
Cape May Dare Imba, NJ Programa de 08210
Udza mashoko: accadmit@atlantic.edu kana (609) 463-4774
Healthmate's inosarudzwa yekudzidzisa nzvimbo
4 vhiki chirongwa che $ 400.00
Bata: (732) 246-4066
Chiremba asina kuroora
Irvington, NJ 07111 Chirongwa
Mavhiki mana e $ 450.00
Bata: (973) 371-0012
245 Atlantic Guta Blvd
Mavhiki matatu e $ 1,100.00
Bata: (732) 341-4500
Warren County Nharaunda Koreji
475 nzira 57 Kumadokero
chirongwa chevhiki nevhiki che $ 900.00
Bata: (908) 835-2333
Berkel Kudzidzisa Institute
Trenton, NJ 08618 Chirongwa
Bata: (609) 392-1855
Bvunza gweta kuti utaure nezve chero chinetso chaungave uine semuchengeti kana chimwe chinhu chikaitika, senge kufa kubva kune zvakasikwa zvikonzero, kune vanhu vauri kutarisira. Iwe haudi kumhan'arirwa kune chimwe chinhu chisiri chako mhosva.
Verenga chero gwaro nokungwarira usati wasaina. Saina chete kana iwe uchinzwisisa uye uchibvumirana nemitemo yebasa.
handyman rezinesi muFlorida
Chii iwe chaunofanirwa kudzidza kuti uve gweta? - Sei…
Maitiro ekuzadza odha yemari yemusungwa
Iyo rezenisi reCDL rinodhura zvakadii muMiami? - Zvese pano